Iifoto zika-Aaron Tilley ziya kukwenza uxhalabise nje ukuba ubabone | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ifoto ka-Aaron Tiley okanye "xa kukho into eyoyikekayo eza kwenzeka"
Ii-GIF zoopopayi zisinceda bamba loo mizuzwana apho kwenzeka into eyintlekele kwaye esivumela ukuba sabelane ngayo nabahlobo okanye usapho lwethu ukuze babe phambi kwlo mzuzu uphantse ungaphindeki.
Into eyenzekayo ngokufota kuka-Aaron Tiley, njengoko ibamba la mathuba ekuza kwenzeka into eyoyikekayo kwaye oko kusibeka kwimithambo yethu. Amatyala anje ngethontsi le-inki emnyama eliza kuwela kwihempe emhlophe okanye loo mqolo wamatye e-cobble aza kuwela kwiglasi ye-champagne, zezinye zeefoto ezibetha isikhonkwane phantse ukuba zikhwaze ukwenzeka.
Olu luhlu lweefoto luvela kwiphephancwadi iKinfolk Waqhagamshelana noAaron Tilley kunye noKylew Bean ukuphinda bawenze loo mzuzu xa kukho into eyintlekele eza kwenzeka.
Iprojekthi igxininisa umdla ubudlelwane phakathi kwento ebonwa yingqondo nendlela umzimba osabela ngayo. Ukulindelwa kubangela ukuba umzimba ukhulule i-adrenaline, nokuba akukho nto yenzekayo, kwaye le mpendulo ikholelwa ekubeni inxibelelene nempendulo yokulwa okanye yokubaleka ebaluleke kakhulu ekusindeni kookhokho bethu.
Iifoto zenzelwe ukuba yenza uluvo loxinzelelo kunye nokungonwabi njengoko sihlala silindele ezo ziganeko zintlekele zizakwenzeka. Umsebenzi ogqwesileyo ngokufota kunye nokwakhiwa kwesandla seBean, umlawuli, ophetheyo ekwenzeni loo mathuba angafanelekanga esingasoze sithande ukuwabona esenzeka, njengomzekelo wehempe emhlophe aza kuthi ukuwa kwetonki emnyama.
Unayo iwebhu ngu-Aaron Tilley ka fikelela kuwo wonke umsebenzi ekuthatheni imifanekiso kunye nakwimifanekiso ehlekisayo.
IBorsi isisa kolunye uhlobo lokufota ukuya kwi-surrealism.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ifoto ka-Aaron Tiley okanye "xa kukho into eyoyikekayo eza kwenzeka"
IMashups iphefumlele imizobo evela kwiDisney nakwiimovie zeHayao Miyazaki
Izixhobo: Eyona bhanki inkulu yokufumana simahla kwi-intanethi